स्वास्थ्य – Jagaran Nepal
काठमाडौँ । धेरै युवायुवतीहरु डन्डीफोरको समस्याले पीडित हुने गरेका छन्। डन्डीफोर छालामा हुने एक प्रकारको रोग हो भन्ने कुरा नबुझ्दा र डन्डीफोर निको पार्ने भन्दै विभिन्न घरेलु उपाय अपनाउँदा धेरैले अनुहारको सुन्दरता गुमाउँछन्। मानिसको शरीरमा हुने रौँको फेदमा स–साना प्वाल हुन्छन्। रौँको जरामा जोडिएर बसेको एक प्रकारको ग्ल्यान्ड हुन्छ। यो ग्ल्यान्डले छालालाई चिल्लो बनाउने विशेष […]
एजेन्सी । पछिल्लो समयमा हृ,दयघा,तबाट हुने मृ,त्यु संसारभरी बढेको छ। अझै युवा अवस्थाका मानिसहरुलाई समेत यसको समस्या गम्भिररुपमा देखिन थालेको छ।पहिले अलि पाको उमेरका ब्यक्तिलाई हुने यो समस्या अहिले आएर युवा अवस्थामा नै देखिन थालेको छ। आधुनिकताका नाममा बढेको रहन सहन र खान पानको का,रणले यस्तो भएको हो। हृ,दयघा,तका लक्षण जुन तपाइले थाह पाउनै पर्छ […]
काठमाडौँ – भिन्डी स्वाद र स्वास्थ दुबैको लागी उपयोगी तरकारी हो । यसबाट धेरै परिकार बनाउन सकिन्छ । भन्डिीबाट अचार पनि बनाउन सकिन्छ । यो अती नै मिठो हुन्छ । भिन्डीको अचार बनाउन यस्ता सामग्री हालिन्छ। भिन्डी १ किलो, हरियो खुर्सानी १ सय ग्राम, ज्यामिर अथवा कागती एउटा, तिलको छोप २ सय ग्राम, तेल १ […]
काठमाडौँ । तपाइँले अक्सर देख्नु भएको छ कि गलत खाने बानी को कारण, मानिसहरुको दाँत धेरै चाँडै बिग्रन थाल्छ। र यसको मुख्य कारण पान,सुर्तिजन्यजस्ता पदार्थहरु र धुम्रपान गर्ने कारणले हुने गर्दछ। हामी आफ्नो दाँतलाई दाँतलाई रगडि रगडि सफा गर्ने गर्दछौँ । तर हाम्रो दाँत जति रग्डेर सफा गरेपनि सफा हुने नाम निसान नै लिदैँन । […]
प्रश्न: गर्भावस्थामा कोभिड खोप लगाएका कारण समय नपुगी वा कम तौल भएको बच्चा जन्मिने सम्भावना हुन्छ? उत्तर : हुँदैन। गर्भावस्थामा खोप लगाएका कारण समय नपुगी वा कम तौल भएको बच्चा जन्मिने सम्भावना हुँदैन। कोभिड–१९ विरुद्धको खोपले गर्भपान हुने, कम तौलको बच्चा जन्मिने, समय नपुगी जन्मिने, भन्ने कुरा गलत हुन्। गर्भावस्थामा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका […]
जाडोमा बालबालिकामा बढी देखिने मुख्य स्वास्थ्य समस्या के हो? कसरी जोगाउने?
प्रश्न : जाडोमा बालबालिकामा बढी देखिने मुख्य स्वास्थ्य समस्या के हो? कसरी जोगाउने? डा रामहरि चापागाईंको उत्तर : बालबालिकालाई स्वास्थ्य समस्या वर्षभरि नै देखिन सक्छ। बालबालिकामा देखिने कुनै–कुनै स्वास्थ्य समस्यामा भने मौसमी प्रभाव पनि हुन्छ। अहिले जाडो मौसम छ। जाडोमा बालबालिकामा बढी देखिने मुख्य स्वास्थ्य समस्या भनेको मौसमी रुघाखोकी र त्यसको कारण हुने जटिलता तथा […]
जाडो मौसममा छाला किन सुख्खा हुन्छ? कस्तो असर पर्छ? सुख्खा हुन नदिन के गर्ने?
1140×725 प्रश्न: जाडो मौसममा छाला किन सुख्खा हुन्छ? कस्तो असर पर्छ? सुख्खा हुन नदिन के गर्ने? डा धर्मेन्द्र कर्णको उत्तर: जाडो याममा वातावरण निकै चिसो हुन्छ। प्रायः मानिसलाई चिसो वातावरण मन पर्दैन। त्यसैले कोठाभित्र वा साँझ–बिहानको समय हिटर नजिकै बसेर न्यानो हुने प्रयास गरिन्छ। यस्तै दिउँसोमा घाममा बस्ने चाहना हुन्छ। तर के तपाईंलाई थाहा छ? […]
काठमाडौँ । बसीबसी गरिने काम, गलत खानपान र हर्मोन परिवर्तनको कारण मोटोपन बढ्दै जान्छ । मोटोपनको असर सबैभन्दा बढी पेटमा देखिन्छ र पेट बढ्दै जान्छ । यो संगै सुरु हुन्छ अल्छी लाग्ने तथा पेट लाग्यो भन्दै तनाव लिने काम । तर चिन्ता नलिनुस् पेटमा जमेको बोसो सजिलै घटाउन सकिन्छ । पेट घटाउन यी ८ उपाय […]